1 Tantara 13 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 13
Ny namindrana ny fiara tao an-tranon'i Obededoma.
1Ary Davida niara-nihevitra tamin'ny tompon'arivo sy ny tompon-jato ary ny mpifehy rehetra, 2ka hoy Davida tamin'ny fiangonan'Israely rehetra hoe: Raha ataonareo ho mety, sy raha toa hevitra avy amin'Andriamanitsika, dia handeha isika haniraka faingana any amin'ny rahalahintsika sisa rehetra, any amin'ny tanin'Israely rehetra sy any amin'ny mpisorona mbamin'ny Levita ao amin'ny tanànany misy tany fiandrasany biby, mba hikambana amintsika izy, 3sy hitondrantsika ho atý amintsika indray ny fiaran'Andriamanitra, fa tsy nahoantsika akory izany tamin'ny andron'i Saola. 4Nasain'ny fiangonana rehetra hatao izany, satria noheverina ho tsara teo imason'ny vahoaka rehetra izany.
5Koa novorin'i Davida Israely rehetra, hatramin'ny Sihora any Ejipta, ka hatrany amin'ny hadilàlan'i Emata, haka ny fiaran'Andriamanitra avy any Kariatiarima. 6Dia niakatra Davida mbamin'Israely rehetra, nankany Baalà, izany hoe Kariatiarima izay any Jodà, mba hampiakatra avy any ny fiaran'Andriamanitra, ny fiaran'ny Tompo izay mipetraka eo ambonin'ny kerobima, izay fiantsoana ilay Anarana. 7Napetrany teo ambony sarety vaovao ny fiaran'Andriamanitra dia nentiny avy tao an-tranon'i Abinadaba: Ozà sy Ahiao nitarika ny sarety; 8Davida sy Israely rehetra nandihy araka izay tratra teo anatrehan'Andriamanitra; sady nihira niaraka tamin'ny harpa aman-dokanga sy amponga tapaka, sy kipantsona, aman'anjomara.
9Nony tonga teo am-pamoloan'i Kidona, dia naninjitra ny tànany hihazona ny fiara Ozà, fa nisolifaka ny omby. 10Fa nirehitra tamin'i Ozà ny fahatezeran'ny Tompo, ka nokapohin'ny Tompo izy, noho izy naninji-tànana tamin'ny fiara, dia maty teo anatrehan'Andriamanitra Ozà. 11Nahatezitra an'i Davida ny nikapohan'ny Tompo an'i Ozà toy izany, ary io toerana io dia nantsoina mandrak'androany hoe Ferets-Ozà. 12Natahotra an'Andriamanitra Davida tamin'izay andro izay, ka nanao hoe: Hataoko ahoana no fampiditra ny fiaran'Andriamanitra ho ao amiko? 13Ka tsy notarihin'i Davida, ny fiara, fa nasainy nentina tany an-tranon'i Obededoma, any Geta. 14Dia nipetraka telo volana tao amin'ny ankohonan'i Obededoma tao an-tranony, ny fiaran'Andriamanitra; ary nambinin'ny Tompo ny ankohonan'i Obededoma mbamin'ny anànany rehetra. >